Ciidamada ka hawl gala Saldhiga Degamada B/wayne oo joojiyay shaqadii ay halkaasi ka hayeen | maakhir.com
Ciidamada ka hawl gala Saldhiga Degamada B/wayne oo joojiyay shaqadii ay halkaasi ka hayeen
December 23, 2007 in General
Baladwayne:-Wararka naga soo gaadhaya magaalada B/wayane ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan inay saaka saldhiga isku gadaameen Ciidamadii horay uga hawli gali jiray kuwaasi oo haba yaraatee diiday in gudaha loo galo Saldhiga lagana soo baxo, waxay taasi ku macneeyeen mushar har la”aan baahsan oo mudooyinka haysatay.
Saaka hiirtii waa Bari ayaa waxa lagu war helay ciidamo fara badan oo isku gadaamay gabi ahaanba Saldhiga kuwaasi oo diiday in shaqada Saldhiga si caadi ah loo dhaqaajiyo,waxay sheegeen Askartaasi inay ku doodayaan Musha harakoodii oo anay helin mudo gaadhaysa ilaa 3- Bilood iyo waliba Gunooyin iyana ay sheeganayan oo ka maqan.
Ciidamadan ayaa diiday in Maxaabiista ku jirta xabsiga laga soo bixiyo ama ciidamo kale oo cusub lagu wareejiyo, mana jirin maanta wax shaqo ah oo laga qabtay Saldhiga Booliska degmada Baladweyne iyada oo dad badan oo soo booqan la haa Maxaabiis eheladooda ah oo Saldhiga ku xidhan ay dib u soo celiyaan.
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ilaa haatan aan ka haldin ciidamadaasi isku gadaamay Saldhigii Degamada Baladwayne, in kastoo uu horay Dabageed meel fagaara ah uga sheegay in hadii Ciidamada Gobolka ka hawl galaa ay waayaan Musha haradooda ay xaqa u leeyihiin ay joojin doonaan shaqooyinka ay hayaan.
"Somalia Seized with Statis"
Students learn how to say it in Somali
Gabay: "Maakhir maamul baa loo dhisoo mahad Ilaah weeye"
No chance for Kulmiye but Reforms
« Dawlada Somaliya oo dalalka carbeed ka codsatay Ciidamo nabad ilaalin ah
Cutubkii ugu horeeyay ee Ciidamada Dawlada Burundi oo maanta ka soo Degay Magaalada Muqdisho »